Degmada Shiniile iyo Kalfadhigii Golaha Baarlamaanka - Cakaara News
Degmada Shiniile iyo Kalfadhigii Golaha Baarlamaanka
Shiniile(cakaaranews)Arbaco 21ka September 2016. Waxaa si heer sare ah uga furmay hoolka shirarka Degmada shiniile ee xarunta Gobolka Siti kalfadhigii 8aad ee Golaha xildhibaanda iyadoo shirkana lagu soo bandhigay warbixintii waxqabadaka 2008T.I iyo waliba ansixinta qorshaha sanad miisaniyadeedka 2009T.I.
Hadaba, kalfadhigan ayaa waxaa ugu horayn furay Afhayeenka Baarlamaanka Degmada mudane Daakir Ducaale oo ugu horayn salaan u soo jeediyay xildhibaanada islamarkaana u mahadceliyay ayaa sheegay in koromku buuxo oo ay soo xaadireen shirka 72 xubnood iyadoo xildhibaanda guud ee degmada shiniile ay yihiin 80 xubnood. Wuxuuna intaa kudaray in ajadanyaasha kalfadhigani yahay dhagaysigii warbixinta waxqabakii 2008TI iyo waliba dhagaysiga qorshaha iyo sanad miisaniyadeedka 2009T.I
Sidookale, Gudoomiyaha Degmada shiniile mudane Cabdi Aadan Kaynaan ayaa halkaas kasoo jeediyaywarbixintii waxabadka 2008T.I. isagoo si faah faahsan guriga ugu soo dhigay waxqabadkii dhinacyada horumarka, Nabadgalyada iyo maamulka suuban, kadibna xildhibaanada ayaa dood iyo falanqayn dheer kadib cod buuxa oo gacantaag ah ku ansixiyay. Waxaakale oo iyana la dhagaysatay miisaaniyada qorshaha 2009 T.I oo iyana goluhu codbuuxa ay ku ansixiyeen.
Ugudanabayna shirka ayaa ku soo dhamaaday jawi wanaagsan oo farxadi ku dheehantahay.